बुद्धधर्मका बारेमा - तिब्बती बुद्धधर्म — Study Buddhism
Study Buddhism › तिब्बती बुद्धधर्म › बुद्धधर्मका बारेमा
बुद्धधर्मले हामी सबैले सामना गरिरहेका परिस्थितिको बारेमा बताउँछ। हामीमध्ये कोही पनि दुखी हुन चाहँदैन। हामी सबै हरतरहले सुखी हुन चाहन्छौं। ध्यान साधना र यथार्थ बोधका माध्यमबाट हामी बौद्धदर्शनका ज्ञानको उपयोग आफ्ना दैनिक जीवनमा आइपर्ने समस्याहरूको समाधानका लागि गर्न सक्छौं।
बुद्धको मूल सन्देश
बुद्धधर्मको अध्ययन कसरी गर्ने
जीवनका समस्याहरूबारे बुद्धले जुन आधारभूत शिक्षा दिनुभयो, त्यो पूर्णतः व्यावहारिक र तर्कसंगत छ। उहाँले हाम्रो समस्याको पहिचान गर्न र तिनलाई स्वीकार गर्न सिकाउनुभएको छ। आफ्नो चित्तभित्र ती समस्याका यथार्थ कारणहरूको खोजी गर्न, चित्तलाई ती कारणहरूबाट पूर्णतः मुक्त गर्न, र समस्याहरूलाई फेरी उत्पन्न नहुने गरी सधैंका लागि समाप्त गर्न सिकाउनुभएको छ। यो दृष्टिकोणलाई नैतिक अनुशासन, एकाग्रता र अन्तर्दृष्टिका साथ अरुप्रति प्रेम र करुणाको भाव राख्दै अपनाउन सकियो भने हामीलाई स्थायी सुख और चित्तको शान्ति प्राप्त हुन्छ।
Multi-Part पूर्ण बौद्ध जीवनः मुख्य विशेषताहरू डा. अलेक्जेन्डर बर्जिन बौद्ध विज्ञान र दर्शनको परिप्रेक्ष्यमा तीन साधनाहरू र अष्टाङ्गिक मार्गको चर्चा।
विगत २५०० वर्षमा बुद्धधर्म एशियाका विभिन्न संस्कृतिहरूमाझ फैलिरहेको छ। पछिल्लो शताब्दीमा बुद्धधर्मको विस्तार पश्चिममा पनि भएको छ। बुद्धधर्मका विभिन्न स्वरूपहरू र अन्य धर्मसँग यसको सम्बन्धका बारेमा अझ जानौं।
बुद्धधर्मको दृष्टिमा अन्य धर्म
बुद्धधर्म विश्वका अन्य विभिन्न धर्महरूलाई स्वीकार्छ र तिनबाट मानवजातिको कल्याण हुने विधिहरू ग्रहण गर्न र उपयोग गर्ने मामिलामा खुला छ।
बुद्धका शिक्षाहरू अत्यन्त गहन छन्। तिनलाई बुझ्न प्रयत्न र चित्तको ग्रहणशीलता आवश्यक हुन्छ। बुद्धका शिक्षाको प्रत्येक विषयमाथि चिन्तन र ध्यान गर्दै आफ्नो दैनिक जीवनमा उतार्न सकिन्छ।
Multi-Part बुद्धधर्मको अध्ययन कसरी गर्नेः श्रवण, चिन्तन र ध्यान डा. अलेक्जेन्डर बर्जिन बौद्धशिक्षाको श्रवण, चिन्तन र ध्यान अन्तर्जगतको सुधारको पथमा बौद्ध पद्धतिबाट अगाडि बढ्न चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमहरू हुन्।
Multi-Part ध्यानः मुख्य बुँदाहरू डा. अलेक्जेन्डर बर्जिन ध्यानसाधनाको बसाइ कसरी गर्ने सम्बन्धमा विस्तृत जानकारी।